Puntland iyo Gobollada dhexe oo ku dhaw in ay kala go’aan sababo la xiriira Roobabkii ugu dambeeyay.
May 16, 2019 Xafiiska Puntland Somalia, Wararka Maanta 0
Gudoomiyaha barlamanka hirshabelle Cusmaan Barre mohamed ayaa ugu baaqay Dowlada Soomaaliya, hey’addaha caalamiga iyo bulashada reer Hirshabelle ee dal iyo dibad ku sugan iney ka qeeb qaataan Dayactirka buundada ceel gaal ee dhawaan eey dumiyeen daadadkii ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee dhawaan ka da ay gobolka Hiiraan.
“Sidaan wada ognahay buundada Ceel gaal waxeey muhiim u tahay isku socodka magaladda ganasiga Hirshabelle ee Baladweyne iyo Gobolada dhexe ilaa iyo Puntland” ayuu yidhi gudoomiyaha.
”Sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa cidkaste oo gacan ka geesan karto dhismaha buundadas iney wax ka qabtaan” ayuu sii raaciyay gudoomiyaha.
Dhowaan roobab mahiigaan ah oo ka da’ay gobolka Hiiraan ayaa waxaa uu dumiyay Buundadii muhiimka u aheyd gobolada Hiiraan iyo Gobolada dhexe taasi oo isticmaali jireen gaadiidka ka yimaada Muqdisho soona mara Gobollada ugu dambeyna soo gaara Gobollada Puntland.
Waxaa cad hadii arintaan aan xal loo helin in uu lumayo isku socodka bulshada Somaliyeed ee kunool gobollada dhexe iyo gobollada Puntland, wallo ay jireen wadooyin qarda jeex ah oo ay adag tahay in gaadiidku maraan.